Sheekada Filimka Raabta: Sushant Singh Rajput Iyo Kriti Sanon Filim Lagu Jah Wareerayo Ayay La Imaadeen! | Filimside –	Monday, July 24th, 2017	" alt="Filimside - logo" border="0" />
Sheekada Filimka Raabta: Sushant Singh Rajput Iyo Kriti Sanon Filim Lagu Jah Wareerayo Ayay La Imaadeen!
Jun 9, 2017 - 1 Jawaab	Waxaa Qoray: Zakarie Abdi Taariikh: June 9, 2017:
Sushant Singh Rajput marwalbo kalsooni ayaa ka muuqato halka Kriti Sanon markaan saameyn la imaan weesay!
Waxaa maanta oo Jimco ah tiyaatarada la saaray filimka Raabta oo siweyn loo hadal haayay laguna kalsoon yahay inuu ganacsi wacan sameyn karo.
Jilaayaasha Raabta: Sushant Singh Rajput, Kriti Sanon, Jim Sarbh, Rajkummar Rao, Varun Sharma and Nidhi Subbaiah
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Raabta: Wada shaqeynta Sushant Singh Rajput iyo Kriti Sanon waa mid wanaagsan loomana maleeyo in markii ugu horeesay ay shaashad kasoo wada muuqdeen sidoo kalena muusigada filimkaan waa mid wanaagsan.
Muxuu Ku Xun Yahay Filimka Raabta: Waa filim lagu jah wareerayo fariintiisa, weliba waa filim u eg in muuqaal kasto oo ku jiro laga soo Copy gareeyay filimo horey loo daawaday!
Daawo Ama Ha Daawanin: Nasiim xumo Raabta ma ahan filim lagu raaxeesan karo fariintiisa casriga ah ama fariintiisa 300-sano ku saabsan oo la isku dhex daray kaliya jah wareer ayaa laga qaadaa daawashadiisa, waa filim halmar la isku dhibi karo daawashadiisa!
Fariinta Filimka Raabta Xambaarsan Yahay Oo Kooban: Shiv (Sushant Singh Rajput) waa wiil xariif ah oo reer Delhi ah balse ku nool meel ka baxsan Hindiya, wuxuuna magaalada Budapest ee daka Hungary kula kulmaa Saira (Kriti Sanon) asigoo si dhaqsi ah u jeclaanayo.
Shiv (Sushant Singh Rajput) wuxuu jeclaanaa Saira (Kriti Sanon) xili uu gabbar kale saaxiib la yahay sidoo kalena wey ku ogtahay Saira.
Saira (Kriti Sanon) waxay bilaabee sida masuuliyada darada ku muuqato ee Shiv (Sushant Singh Rajput) u dhaqmo inay u dhaqanto laakiin midaas waxay dhaxal siinee inay Shiv (Sushant Singh Rajput) jaceyl u qaado madaama ay dabeecadihiisa yeelaneyso.
Sheekada waxaa kusoo biirayo Zak/Zakir Merchant (Jim Sarbh) oo qamri cab ah sidoo kalena jaceyl u qaadayo Saira (Kriti Sanon) sidoo kalena wuxuu diidayaa inuu aqbalo diidmada cad ee dhanka Saira (Kriti Sanon) kaga imaaneyso.
Zak/Zakir Merchant (Jim Sarbh) oo carrada ka badatay wuxuu ku guuleesanaa qorshe ah inuu Saira (Kriti Sanon) afduubto wuxuuna geynaa jasiirad cidlo ah oo aan dadka soo booqanin.
Si dhaqsi ah Saira (Kriti Sanon) cidlo ayay ku dareemeysaa jasiirada la geeyay waxayna ka fikireysaa waqtigii wacnaa oo ay isla qaateen Shiv (Sushant Singh Rajput) sida ay ku heli karin.
Kadib waxaa xigto sheeko riyo ah oo laguugu tusaayo 300-sano ka hor jaceyl sedex geesood ah oo ka dhaxeeyay labo wiil iyo gabbar, weliba dagaal yahay (Sushant Singh Rajput) ayaa jeclaanayo boqorada uu ilaaliyo (Kriti Sanon) laakiin noloshooda waxaa isku diidayo (Jim Sarbh).
Hadaba waa maxay xiriirka ka dhaxeeyo sheeko dhacday 300-sano ka hor iyo xiligaan casriga ah nolosha ay nool yihiin Shiv (Sushant Singh Rajput), Saira (Kriti Sanon) iyo Zak/Zakir Merchant (Jim Sarbh).
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Raabta: Ma ahan wax caqliga qaadan karo qaabka loo dhigay sheekada filimka Raabta waana mid lagu wareerayo oo aan laheyn jiho toosan.
Kaliya is fahanka iyo jaceylka ka dhaxeeyo Shiv iyo Saira ayaa filimkaan loo daawan karaa laakiin fariin kugu soconeyso laguma soo bandhigin.
Director Dinesh Vijan filimkiisa kowaad ee uu sameeyo waa mid fashilmay aragti ahaan, isku xir ahaan kaliya wuxuu ku guuleestay inuu soo amaah sado ficilada Action-ka ah ee filimada Hollywood-ka lagu soo bandhigay iyo inuu filimkiisa xayeysiin balaaran u sameeyo!
Bandhiga Jilaayaasha Filimka Raabta: Sushant Singh Rajput kalsooni ayaa ka muuqato marwalbo oo uu shaashada hor imaado sidoo kalena doorkiisa si wacan ayuu u matalay laakiin filim lagu jah wareerayo horey uma dhaqaajin karo.
Kriti Sanon wey qurux badan tahay filimkaan laakiin qaab jilinkeeda waa mid dhex dhexaad ah, weyna ku guul dareesatay inay saameyn xoogan la imaado filimkaan.
Jim Sarbh waji qamarjinimo iyo doorkiisa laadarka waa mid wanaagsan laakiin nasiib daro qaabka doorkiisa loo qoray aya ku cayaaray dadaal walbo ee uu sameeyay.
Rajkummar Rao isagana meel cidlo ah ayaa lagu qasaariyay doorkiisa ma ahan wax jiro kaliya waxaa lagu xasuusan doonaa Make Up-ka loo sameeyay ee loogu ekeysiiyay odey 300-sano jiro!
Gunaanad: Raabta mudada 2-saac iyo 38-daqiiqo ee uu soconaayo waa mid lagu caajisayo sidoo kalena lagu jah wareerayo sidaa darteed kooxda filimada ka faaloodaan waxay siiyeen 2/5 taasi oo ka dhigan in labo xidig uu helay filimkaana sheeko ahaan aad u liito.
Waxaa Aqriyay: 1,326
Fan of shraddha kapoor says:	June 9, 2017 at 12:51 pm	Sheekada magadheera ayuu aad u shaabahaa lkn magadheera magaaro kan waa lagu dawaqaa